Daraasad: Dhibaatada ugu badan ee Baraha Bulshada waxaa la kulma Gabdhaha marka la barbar dhigo Wiilasha - Bandhiga Media
Daraasad ay sameeyeen quburo u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka caafimaad ee uu leeyahay isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan marka qofka uu la qabsado.
Waxyaabaha laga dhexlo waxaa kamid ah walwalka, nasaho la’aan dhanka maskaxda ah, la macaamilka dadka oo kaa xumaada iyo indhahaaga oo aragooda uu la ciifo, waxaana arrimahani dhowr jeer ka digay xeeldheerayaasha dhanka caafimaadka.
Daraasad cusub oo uu daabacay machadka caafimaadka ee Lancet Child & Adolescent Health ayaa lagu sheegay in arrinkan baraha bulshada uu yahay mid dhibaatadiisu ay sii kordheyso, waxaa laga dhexlaa caafimaad darro dhanka maskaxda ah_ sida ay daraasaddu sheegtay.
Daraasadda ayaa si gaar ah u xustay in Gabdhaha ay yihiin dhibanayaasha baraha bulshada, waxaana ay ku seegaan hurdada iyo jimicsiga iyadoo subaxdii waqti hore laga sugayo waxbarashada, ama shaqada guriga oo wiilasha ay kaga duwan yihiin.
“ Dhab ahantii waa wax iska cad in caafimaadka uu waxyeeleeyo isticmaalka baraha bulshada” sidaas waxaa yiri Dasha Nicholls oo hogaaminaya quburada daraasadda sameeyay.
Waxa uu sidoo kale qaadaa dhigay in waxyabaha qaar ee lagu wadaago Online-ka iney yihiin wax xun sida sawir gabar oo qaawan, muuqaal la jarjaray iyo fariimo been ah oo lagu qalbi jilicsado gabdhaha.
Daraasadda ayaa intaa ku dartay in Gabadha lagu shukaansado mararka qaar wadan hebal ayaan joogaa iyadoo Lambarka iyo tilmaaha aqoonsi labadalayo, waxaana dhacdooyinkan inta badan ay ka dhacdaa wadamada Africa.
Siynisyahada ayaa kula dardaarmay dhalinyarada iney hurdo fiican qaataan, iyo in noloshooda aysan ku dhumin maalaa yacni, waxaana uu intaa ku daray in maskax ahaan iyo jir ahaan uu u baa’bayo qofka.
Dhalinyarada ayaa sidoo kale lagula taliyay in ay qadka iska xiraan marka hurdada la gaaro amaba ay iska damiyaan .